रिपोटर्स क्लवमा हृदेश त्रिपाठी गरे अर्थमन्त्री माथि आक्रमण, २०३४ सालदेखि अहिलेसम्म समस्या उस्तै – BikashNews
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यशैलीको बारेमा धेरै आलोचना भईरहेको छ । यसै क्रममा तत्कालिन एमालेको चुनाव चिन्ह्रमा निर्वाचमा भाग लिई सांसद बनेको हृदश त्रिपाठीले अर्थमन्त्रीमाथि राजनीतिक आक्रमण गरेका छन् ।
उनले वर्तमान सरकारप्रति जनतामा आक्रोश बढ्नुमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । सांसद हृदेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सरकारप्रति नकारात्मकता बढ्न थालेको बताए ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद त्रिपाठी अर्थमन्त्री निकै आक्रामक भए । नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कुरुप कुरा नै विकास खर्च पूरा गर्न नसक्नु रहेको उनको भनाई छ । त्रिपाठीले थपे,‘२०३४ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले विकास खर्च कहिल्यैपनि पूरा गर्न सकेनौं । जबसम्म विकास खर्च पूरा हुँदैन, तबसम्म आर्थिक रुपमा बजारलाई चलायमान र जनतालाई पनि विकासप्रति आकर्षित गर्ने काम गर्न सक्दैन् ।’
उनले भने, ‘यो सरकारलाई बढि प्रभावित चाहीँ बजेट प्रस्तुतिले पनि गरेको हो । र, अर्थमन्त्रीको गतिविधिले पनि सरकारलाई प्रभावित गरेको छ ।’ अधिकांश सरकारको सफलता र विफलता ५० प्रतिशतभन्दा बढि त अर्थमन्त्रालयको गतिविधिमा निर्भर गर्ने उनको भनाई छ । उनले थपे,‘बजेट जुन दिन प्रस्तुत हुन्छ, त्यही वेलादेखि चर्चा सुरु हुन्छ । तर, ठाउँमा पुग्न चार–पाँच महिना लाग्छ ।’